Banyere Anyị - Hangzhou AODI Electronic Control Co., Ltd
Hangzhou AODI Electronic Control Co., Ltd (AODI chaja), emi odude ke Hangzhou obodo, nso Xiaoshan na Shanghai Airport, bụ ọkachamara na-eduga na elu-tech enterprise maka ọhụrụ ume electric ugbo ala na ulo oru ngwa. Dị ka na-akwado ha so National Innovation Fund, anyị kwara Nlụpụta anụ àgwà, elu arụmọrụ kọmputa na ngwaahịa.
Ruo ugbu a, anyị nwere 7 usoro ngwaahịa maka Electric Auto Cars, gụnyere ikuku-mma on board batrị chaja, mmiri-mma on board batrị chaja, DC / DC Ntụgharị, integrated ikuku-mma odori usoro, integrated mmiri-mma odori usoro, Battery management usoro (BMS), Intelligent data ọnụ odori usoro APP na nwa on.We bụ ndị mbụ elu-tech enterprise na ọgụgụ isi data ọnụ odori usoro APP na China.
Na 2015, anyị wuru Product Innovation Management System (SPIM) na Product Control Management System iji melite ogo na ibelata ala mmezi ruru iji nweta ihe 0PPM quality mgbaru ọsọ site na-ewebata na akpaghị aka ule ngwá na mmepụta edoghi n'okpuru ike na usoro arụmọrụ akara nduzi . Ugbu a, anyị nwere ike na-emepụta 50000 nkeji chaja na DC / DC converters kwa ọnwa.
Aodi chaja na-aghọ gị nso onye na ọkachamara odori ngwọta dị ka ihe niile na ụwa a na-ọkụ.
Anyị na-ejere ise isi ebe nke ulo oru ngwa ngwa: efe n'elu na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu, Ft ihicha igwe, Golf adọkpụ Ihe ejizi ngwá na Electric ọgba tum tum.
"Quality mmata" bụ mgbe niile na AODI n'uche ndị mmadụ, ọ bụ anyị ụkpụrụ dị na-ebu ndị IATF16949: 2016 / ISO9001: 2005 management usoro.
Ka ndị ọrụ mara AODI,
Ịmepụta uru maka ọrụ,
nwee nrọ maka AODI People,
Inye azụ ka otu
Ịdị n'otu, Rihanna,
Dị ike ọrụ,
Mgbe niile na ike Development
Nye azụ otu